AASAASKA HABKA URURKU U SHAQEEYO | Organisationer av och för invandrare och flyktingar
Organisationer av och för invandrare och flyktingar
inklusive kurs i föreningskunskap
AASAASKA HABKA URURKU U SHAQEEYO
Föreningskunskap på somaliska
Si barnaamijku u dhaqaaqo si aad u fudud, waxa wanaagsan in la helo xeerar ka dhaxeeya ururka oo qeexaya waxa lagu wada dhaqmayo. Waxa kale oo mihiim ah in la ogyahay sharcitada jira iyo sida loo dhiiban karo codkaaga iyo fikradaada.
Sharciyo– xeeraraka ururka
Ururadu waxa ay wadda leeyihiin xeerar aasaasi ah oo ay ku hawl galaan.
Marka ururka la sameynayo ayaa si wada jir ah loo go’aamiyaa shuruucda ururka taas oo qeexaya barnaamijka ururka iyo xeerarka cadeynaya sida hawsha loo wadayo.
Hadii la rabo xataa waxaa la go’aamin karaa markaa sida loo albaab xidhayo barnaamijka
Shuruucda waxa ku cad xeerarka khuseeya barnaamijka: Sida loo doorto hogaamiye, xisaabiye (qasnaji) iyo guddida, xilliga la qaban doono shir sanadeedka, inta mar ee la rabo in xubnuhu isku yimaadaan, iyo sida la iskugu yeero xubnaha iwm.
Shuruucdu waxa ay qeexayaan sida ay xubnuhu uga qayb qaataan go’aan qaadashada iyo in xeerarka ay ku jiraan:
Sida looga mid noqon karo ururka iyo xubnuhu waxa ay xaq uleeyihiin iyo waxa xaq loogu leeyahey.
Sida go’aammada lo qaato (Codeyn ama gacan taag iwm)
Barnaamijka (waxqabadaka)- iyo xisaabaha sannadka
Shir sannadeedka: maxaa laga wada hadlayaa iyo sidee ba la iskugu yeedhayaa xubnaha
Kulanka joogtada ah xubnaha iyo haddii loo baahdo kulammo dheeraadah.
Mooshinka iyo fikradaha kale ee xubnaha
Albaab xirka ururka (marka ururka la baabiinayo)
Tusaale shuruucda caadiga u ah ururrada: Normalstadgar
Barnaamijka wax qabadka sanadka waxa lagu bilaabaa laguna dhameeyaa iyada oo la qabto shirweyne (kulan weyn, ijtimaac iwm). Shirweynaha waa in loogu yeedhaa xubnaha ururka oo dhan iyadoo la raacayo sida sharciga ku cayiman. Goobtaa waxa lagu xulaa guddi iyo hawl galeenno kale, waxaana la doortaa jihada barnaamijka, taas oo ay micnaheedu tahay in la qorsheeyo barnaamij sanadeedka ururka. Sharciga ururka ayay ku xusan tahay waxa laga wada hadli doono shirweynaha sanadka.
Waxa caado ah in la doorto xidhiidhiyayaasha shirka oo ka kooban hogaamiye, kaaliye, codtiriye iyo saxe. Waxa haboon in dadkaasi aanay aheyn kuwa ku jira gudida ururka.
Gudida ururku waxa ay isku soo diyaarinayaan in ay ka hadlaan hawlaha ururka u qabsoomey sanadkii la soo dhaafay.
Shiweynuhu waxa uu doortaa xisaabiye, kaas oo waxqabadka dib u raaca xisaab xidhna ku sameeya dhaqaalaha. Sanadka ku xiga xisaabiyuhu waxa uu ka warbixiyaa xisaabxidhkii uu sameeyay sanadkii la soo dhaafay ilaa shir sanadeedka.
Shirsanadeedku wax uu ansixiyaa baadhitaankii xisaabiyuhu ku sameeyay waxqabadka iyo dhaqaalaha sannadka iyaga oo haddii ay qancaan aan waxba loo tirsanayn guddiga.
Ururku xiliga kale ee uu go’aan weyn qaadan karaa marka laga reebo shirweynaha sanadka waa xilliga ay xubnuhu kulmaan, inta u dhaxaysa labadaa kulan waxa go’aanadda gaadhi karaa waa guddiga.
Tusaale ku sahabsan ajendaha shirweynaha
Shirweynaha waxaa la doortaa guddi ka kooban gudoomiye, xisaabiye iyo dhowr qof oo xubno dheeraada. Ururkasta isaga ayaa go’aansadda inta xubnood ee gudigu ka kooban yahay, haddii aanay ku qorneyn shuruudda ururka. Si ay shaqadu isku xidhnaan u socoto waxa la doortaa guddida maamulka ururka muddo laba sannadood ah (iyada oo qayb la badalayo markiiba).
Dhamaan xubnaha ururka oo dhan waa ay isa soo sharixi karaan hadii aaney jirin wax shuruud ah oo xidhaaya sida da’ada oo kale, khaasatan ururrada dhalinyarada. Waxa dhacda in ay musharixiintu ka badan yihiin boosaska bannaan oo tartan soo galo meesha. Haddii uu qof dalbado waxa loo kala doortaa dadkaa si qarsoon oo qofkasta uu codkiisa ku soo qoro warqad yar meelna lagu guro. Sidaas waxa loo sameynayaa in aan la ogaan qofka codkiisa siduu u dhiibtay. Si kale oo Doorashooyinka loo qaadi karaa waa gacanta kor loo taago.
Marka laga reebo gudoomiyaha oo lagu soo doorto shirsannadeedka, waxa guddigu ay dhexdooda iska soo doortaan khasnaji, kaaliye iyo hawlgaleennada kale. Hawl-wadeeno/ hawl-fuliyeyaal kale waxa ay noqon karaan qof waxbarashadda qaabilsan, qof diyaariya xafladdaha iwm. Waxa arintaas lagu sameeyaa kulanka ugu horeysa ee ay yeeshaan xubnaha gudigu ka dib marka lagu soo doorto shirweynaha, kulankaa oo loo yaqaano shirka dastuureynta.
Shirkaa oo iyana lagu go’aamiyo cidda magaca ururka ku saxeexi doonta ( qofka warqadaha ururka saxeexaya)
Badanaa waxa saxeexa guddoomiyaha wixii aan ahayn dhaqaalaha oo uu saxeexo khasnajigu. Ururadda qaarkood waxa ay door bidaan in laba qof ay saxeexaan mar kasta markaas waxa wadda jir u saxeexa gudoomiyaha iyo khasnajiga.
Hadii aaney ku qorneyn sharciga sida la sameynayo waxa go’aamisa gudiga.
Tusaale ku sahabsan shirka dastuureeynta
Waxaa go’aanka ugu sareeya ee ururka gaari karaa waa shirsannadeedka iyo kulanka xubnaha. Intaa ka dib waxa laga rabaa in guddigu ay hubiyaan in hawlaha ururka u socdo sida sharcigu dhigaayo. Gudiga ayaa ku shaqo leh soo diyaarinta , meelmarinta iyo waliba:
Ku baaqidda shirka
Diyaarinta arimaha shirka
Isku dubaridka shaqada ururka
Hadaba si hawsha ururku ugu socoto si wanaagsan waxa muhiim ah in dadka raba in masuuliyad loo dhiibo (in ay ka mid noqdaan guddiga) ay yimaadaan kulammada oo ay ka qayb qaataan shaqada. Waa mid aad u wacan in qofku uu soo ogeysiiyo hadii cudur daar uu jiro.
Shay aad u mihiima oo ka mid ah barnaamijka ururka waa in la soo kordhiyo xubnaha iyo in la xanaaneeyo xubnaha. Gudigu waxaa xil loogu leeyahay in ay u tusaan xubnaha in hawlaha ururku ay yihiin mid qiimo leh. Gudigu waa uu ka masuul yahay dhaqaalaha ururka, kaas oo ka koobnaan kara faracyo badan.
Waxa aad u muhiim ah in dakhliga ururku uu daboolo kharashka ururka. Guud ahaan waxa sharci laguugu leeyahay in aad caddeyso (xafiiska cashuuraha) hadii ururka wax ganacsi dhaqaale ka dhex socdo. Laakiin ururada aan faa’iido laga rabin ee bulshadana u adeega way kooban tahay cashuurtoodu.
DHAQAN AAD U QOTO DHEER
URURADDA KALA DUWAN